Biraon'ny WPS 2019: safidy tsara sy maoderina amin'ny LibreOffice | Avy amin'ny Linux
«WPS Office» mpanohitra matanjaka hatrizay «LibreOffice» momba ny «Sistemas Operativos Linux» rehefa mitantana ny endrika an'ny «MS Office». Ankoatry ny maha fonosana rindrambaiko malalaka sy miasa an'ny «Aplicaciones Ofimáticas» izay mahomby amin'ny fanatsarana ny famokarana amin'ny tetikasa misy teti-bola ambany.
Araka izany, «WPS Office» dia fonosana rindrambaiko maoderina, na dia tompony sy mihidy aza, izay «Aplicaciones Ofimáticas» ahitana programa vaovao sy azo ampiharina amin'ny endrika asa iraisana, toy ny takelaka an-tsoratra, takelaka ary famelabelarana, tsy misy anisany «Visor de PDF». Ny anarany dia avy amin'ny fanafohezana ny anarana, amin'ny teny anglisy, ny fampiharana azy mandrafitra azy, izany hoe, «WPS = Writer, Presentation y Spreadsheets».
Tsara ny manamarika izany «WPS Office» dia suite famokarana be mpampiasa izay misy sehatra hafa (Windows, Linux, Android ary iOS), izany hoe, natao ho an'ny solosaina sy fitaovana finday. Amin'izao fotoana izao dia misoratra anarana amin'ny fametrahana fametrahana//- 1.200 tapitrisa.
«WPS Office» azo raisina ho vahaolana avo lenta izy io, na eo aza ny fahafaha-mividy azy, ary amin'ny haavo fantatry ny hafa toa ny Microsoft Office, izay tena mifanentana sy azo ampitahaina. «Writer, Presentation y Spreadsheets» dia matanjaka toa an'i «Microsoft PowerPoint, Excel y Word».
Biraon'ny WPS 2019: endrika manohana
Ny efitrano fiasan'ny birao «WPS Office» dia novokarin'i «WPS Office Software» izay zanaky ny «Kingsoft Corporation», izay orinasan-tserasera sy rindrambaiko mitarika amin'ny Internet any Shina, natsangana tamin'ny 1989, saingy misy Birao any Etazonia, Shina ary Hong Kong amin'izao fotoana izao, manana mpiasa maherin'ny 900 ary manana Ivotoerana R&D 6. D.
Ankoatra izany, «Kingsoft Corporation» dia mpamorona eran-tany vahaolana amin'ny rindrambaiko birao, mamolavola fampiharana fampiharana ho an'ny tsenan'ny mpanjifa sy ny orinasa. Manana mpampiasa voasoratra anarana maherin'ny 1 lavitrisa eran'izao tontolo izao izy io.
1 Ny momba ny Biraon'ny WPS
1.2 Vaovao, fiasa ary fiasa
1.3 Fametrahana sy fikirakirana
1.3.1 Fampidinana rakitra
1.3.2 Mihazakazaka ny fampiharana
1.3.3 Fanamarinana Interface amin'ny Espaniôla
1.3.4 Fanamarihana amin'ny Diksionera Espaniola
1.3.5 Manamarina ilay kinova napetraka
Ny momba ny Biraon'ny WPS
«WPS Office» amin'izao dia manana tranokala ofisialy amin'ny espaniola izay misy fanohanana amin'ny fiteny maro. Izy io koa dia manana mahasoa be fiarahamonina ofisialy amin'ny anglisy, avy amin'ny toerana ahafahanao misintona ireo rakitra apetraka, ireo interface (mui) ary ireo rakibolana amin'ny fiteny maro (dicts)ües, endritsoratra (endritsoratra), fitaovana sasany (fitaovana) ary fahazoan-dàlana. Amin'izao fotoana izao, «WPS Office» mandeha ho an'ny «versión 11.2.0.8893» ho an'ny Windows sy «versión 11.1.0.8722» ho an'ny Linux.
Birao WPS 2019: tranokala fampidinana
Na dia tsy tranonkala ofisialy aza ny tranokalan'i «Arch Linux» manana tsara Fizarana ao amin'ny WPS. izay ahafahanao misintona ireo rakitra fametrahana, interface (mui) ary rakibolana amin'ny fiteny maro (dicts)ües, ary misy fanitarana noforonina tao misy.
Vaovao, fiasa ary fiasa
Anisan'ireo maro hafa, ireto manaraka ireto:
Nanampy singa PDF hanohanana ny fisokafan-drakitra PDF (Kingsoft PDF Reader)
Nanampy fanampiana amin'ny fametrahana sy ny fandefasana amin'ny Centos7.
Nanamboatra olana isan-karazany amin'ny fidirana ao amin'ny kaonty antontan-taratasy.
Namboarina bibikely misy tag WPS, izay hikipy, ho very, na hikatso.
Fanatsarana ny fizotry ny fametrahana, fanokafana ary fanontana antontan-taratasy.
Namboarina bibikely miaraka amina endri-tsoratra ao anaty boaty fampidirana ao anaty tranokala anatiny.
Niampy fanohanana ny fanitsiana ny sisin'ny pejy rehefa manonta.
Niampy fanohanana ny fahatsiarovana mari-pahaizana fanontana toetra.
Namboarina ny olana tamin'ny hoditra namboarina WPS rehefa manokatra sy manidy ny fampiharana.
Ny olan'ny sisintany dia namboarina tao anaty boaty fifampiresahana sasany.
Niasa fanitarana ny sakan'ny endri-tsoratra.
Niampy fanohanana amin'ny famakiana zavatra ranomainty.
Nanampy fanampiana amin'ny fanafarana rakitra an-tsoratra amin'ny endrika toa csv / prn / txt.
Hadisoana raikitra rehefa mitahiry ny boky fiasa OOXML nozaraina.
Bug namboarina tamin'ny fanontana ireo boky nizara tamin'ny mpizara nizara.
Nanampy fanohanana hanohanana ny fampitana ny fampisehoana amin'ny endrika video.
Niampy feo fandraisam-peo, mamela ny fandraketana atiny mandritra ny fampisehoana.
Anisan'ireo miavaka indrindra, hita fa nilaza izao fa tsy manohana kinova 32-bit intsony ny Office Suite.
Biraon'ny WPS 2019: Inona no Vaovao, Fomba fiasa ary fiasa
Mifanaraka amin'ny DEBIAN, Fedora, CentOS, OpenSUSE, Ubuntu, Mint, Knoppix ary maro hafa.
Mifanaraka tanteraka amin'ny Microsoft Office.
Izy io dia misy Spell Checker misy amin'ny fiteny 10 mahery.
Fanohanana avy amin'ny vondron'olona mpampiasa loharano misokatra.
Mifanaraka tanteraka amin'ny Microsoft Office (.DOC sy .DOCX).
Mamela ny fampidirana sary, sary ary tabilao ao anaty antontan-taratasy.
Manaiky lahatsoratra manankarena, endri-javatra fandefasana pejy sy fehintsoratra.
Manampia fanovana lalana sy hevitra.
Ataovy ny fanokafana antontan-taratasy marobe amin'ny fampiasana kiheba.
Ahitana fitaovana fanitsiana fehintsoratra hanova mora ny endrika takelaka.
Mifanaraka tanteraka amin'ny Microsoft PowerPoint (.PPT sy .PPTX).
Mamela ny fampidirana sary, horonan-tsary, sary mihetsika manokana sy maro hafa.
Manaiky ny famoronana sary, tabilao ary latabatra.
Ataovy ny fisokafan'ny fampisehoana marobe amin'ny kiheba.
Mifanaraka tanteraka amin'ny Microsoft Excel (.XLS sy .XLSX).
Manohana asa ho an'ny vola, statistika, informatika, maro hafa.
Mamela ny fampidirana sary, kisary, tabilao ary latabatra.
Ahitana fitadiavana sela manokana ho an'ny ao anatiny.
Ahitana fiasa an-jatony sy fomba fiasa mahazatra.
Misintona, mametraka ary manamboatra «WPS Office» (amin'ny Espaniôla) mora loatra. Amin'ny ankapobeny dia alaina ao amin'ny ampidiro ny fizarana tranokala ofisialy amin'ny teny anglisy, ary aoriana la interface amin'ny Espaniôla (es_ES.7z) ary ny Rakibolana espaniola (es_ES.zip), avy amin'ny faritra AUR avy amin'ny tranokala ArchLinux. Avy eo ny WPS Office Suite mampiasa ny azo tanterahina miaraka amin'ny baiko «dpkg» ary esory ny zoro interface sy ny rakibolana amin'ny lahatahiry tsirairay avy, izay:
Làlan'ny rakibolana (Dicts):
Mijanona fotsiny izy io mba hamerenana sy hitsapana ny fandidiana sy ny fandaminana amin'ny teny Espaniôla.
naoty: Ny endritsoratra, interface amin'ny espaniôla ary rakibolana amin'ny espaniola azo tratrarina ihany koa ary amin'izao fotoana izao, toy ny fisie ".deb" Amin'ny manaraka rohy. Ho an'ny fametrahana tsara kokoa sy ny fikirakirana mora kokoa.
Birao WPS 2019: Fampidinana rakitra
Mihazakazaka ny fampiharana
Fanamarinana Interface amin'ny Espaniôla
Fanamarihana amin'ny Diksionera Espaniola
Manamarina ilay kinova napetraka
Farany fa tsy latsa-danja amin'izay, Marihina fa ny WPS Office dia manome fitaovana PDF an-tserasera ihany koa Tsy mila misintona rindrambaiko hanovana ny antontan-taratasinao ho PDF na ny mifamadika amin'izany. IRETO Fitaovana PDF izy ireo dia vahaolana 100% maimaimpoana amin'ireo olantsika amin'ny fisie PDF toy izany.
Izy io dia fonosana rindrambaiko manana sy mihidy, na dia tena maoderina sy mandeha aza.
Tsy manohana ny LibreOffice Open Document Format na Standard (ODP / ODF).
Tsy mampiditra fanohanana amin'ny fiteny maroüNatao ho an'ny fiteny hafa ankoatry ny sinoa sy anglisy. Ny fanampiana dia tsy maintsy ampidirina amin'ny tanana amin'ny alàlan'ny fandikana rakitra amin'ny làlana arovan'ny mpampiasa mahazatra, amin'ny Linux.
Ny fampidirana miaraka amin'ny MS Office Documents dia tena tsara fa mila nohosorana izy mba hanatsarana azy.
Ny fampifangaroana amin'ny rahona, izany hoe, ny fidirana an-tserasera dia tena ilaina tokoa, saingy ny asa tsy maintsy atao hanatsarana azy io mba hiantohana ny fifandraisana sy ny fampifangaroana amin'ireo serivisy mailaka ampiasaina toa an'i Google.
Tsy manana fanampiana ofisialy amin'ny fiteny Espaniôla sy fiteny hafa izy ireo.
Matetika dia mandany manodidina ny 200 MB RAM eo am-panombohana, ka amin'ny solosaina antitra sy / na loharano ambany dia mety ho mavesatra be ny fampiasana azy.
Araka ny hitanao izao «WPS Office» dia serivisy birao tompony tena tsara sy feno, izay miaraka amina kinova maimaimpoana sy kinova andoavam-bola ary miaraka amina fanohananana tsara, amin'ny teny anglisy sy sinoa, avy amina vondrom-piarahamonina mpampiasa marobe ary manana atiny an-tserasera tena tsara ho an'ny fiaraha-monina sy ny fampielezana azy. Raha misafidy ny hampiasa azy ianao dia mamporisika anao izahay mba hahatsapa indraindray ny zavatra zarain'ny fiarahamonina misy anao na ny anao Blog.
Raha fintinina, «WPS Office» tsara fotsiny izany «alternativa privativa» a «LibreOffice», ho an'ireo izay tia programa azo ampidirina «Linux», izay mifanaraka na tsia, amin'ny filozofia «Software Libre», fa mahafeno tsara ny zavatra ilainao izany.
Izany hoe, raha mbola «LibreOffice» no tsara indrindra «Suite Ofimática» de «Software Libre» amin'ny «Linux», «WPS Office» maneho tena tsara fotsiny «alternativa privativa» amin'ny «Linux», ankoatry ny sasany, toa ny «FreeOffice», momba ny fitantanana ny fisie fisie birao «MS Office» midika izany. «WPS Office» Tsy ny fanoloana ampahany na manontolo «LibreOffice» fa kosa hamenoana azy amin'ny lahasa asa miaraka amin'ireo rakitra ao «MS Office».
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » fampiharana » Biraon'ny WPS 2019: safidy maoderina tsara indrindra amin'ny LibreOffice
Eny, faly aho fa tian'ity mpanoratra ity suite ity. Izy io dia vahaolana tsara, miasa tanteraka, mora vidy na maimaim-poana ary vita tsara. Ny tiako holazaina dia ny fahatsapana fa tsy ara-barotra noho ny lahatsoratra iray izany. Farafaharatsiny mba tokony hisy ny fitsikerana sasany, sa tsy izany? Tsy haiko .. inona ny vahaolana tompona? Izany dia tsy mifanaraka 100% amin'ny Office noho ny olana apetrak'i Microsoft? (ny macros dia tsy mifanaraka 100%, ohatra.) Ataoko fa fahadisoana amin'ny fandikan-teny izany, saingy nampientanentana ahy manokana ny fananana mpampiasa maherin'ny iray lavitrisa voasoratra anarana manerantany. Mba hahatratrarana io isan'ny mpampiasa io dia mila tontolo 200 farafaharatsiny toa ny Tany xD.
Izay rehetra nolazainao, miampy ary tsy mifanaraka amin'ny antontan-taratasy ODT?
Miarahaba anao Mikelete. Azo antoka fa tsy mahazaka izany izy ireo ary tsy manana drafitra amin'izany. Ity fanambarana ofisialy ity dia milaza: http://wps-community.org/forum/viewtopic.php?f=4&t=26&p=96
Eny, ny fitadidiana an-tsaina ny hakitroky ny mponina any Shina; miampy olona avy amin'ny lafivalon'izao tontolo izao, izay tsy mijanona manana quota, INDRINDRA amin'ireo fametrahana amin'ny finday Android… azo antoka fa marina ny kaontin'ny fametrahana, na dia nesorina tampoka aza izy io!
Miarahaba, Kaisara. Betsaka amin'ireo fametrahana ireo no mety tsy hihetsika intsony. Ahoana ny fomba hitrangan'izany amin'ny programa hafa.
Miarahaba anao, Argo. Hoy ilay lahatsoratra: "Amin'izao fotoana izao dia +/- 1.200 miliara fametrahana." Raha ampianao fa ny Office Suite dia China, ary ampiasaina amin'ny Android, iOS, Windows ary Linux. Azo antoka fa tsy misy zavatra hafa ao Shina azo tanterahina ireo tarehimarika ireo, satria nisy 1.400 tapitrisa mponina, tamin'ny taona 2018, ary mitombo amin'ny taha +/- 2.500.000 isan-taona izy ireo. Ary eny, nino izy fa ny zavatra ratsy indrindra ananan'izy ireo dia ny tsy fanohanan'ny fenitra ODF ankehitriny sy ho avy. Ary mazava ho azy, izay mifanentana amin'ny MS Windows dia mety tsy hahatratra 100% mihitsy, saingy takatra izany, satria samy tompona izy roa.
rasnol dia hoy izy:
Raha ny teny espaniola no natambatra ho lasa toerana, dia ho tsotra kokoa ny zava-drehetra.
Raha tsy izany dia safidy mahaliana an'ny LibreOffice io
Mamaly an'i rasnol
Alexandros dia hoy izy:
Manaitra ahy ny hiresahanao momba ny filan'ny tompony satria miala amin'ny fitsipiky ny rindrambaiko maimaimpoana ity. Hitako fa i Libreoffice no vahaolana tsara indrindra ho an'ireo mpanohana loharanom-baovao.
Amin'ny tsy famelana ny endrika Libreoffice dia hazavainao tsara hoe inona ny fikasanao.
Valiny tamin'i Alexandros
Miarahaba, Alexandro. WPS dia safidy tsara indrindra ho an'ireo izay tia programa azo apetraka ao amin'ny Linux, na mifanaraka amin'ny filozofian'ny Free Software izy ireo na tsia. Ary eny, LibreOffice no Free Software Office Suite tsara indrindra amin'ny Linux, fa ny WPS kosa dia safidy hafa mifehy azy amin'ny Linux. Zavatra iray tsy manilika na mampihena ny iray hafa.
Victor guerrero dia hoy izy:
"Mpanohitra mafy an'i" LibreOffice "foana tao amin'ny" Linux Operating Systems ". Hatramin'izay dia vahaolana vahaolana tsara hatrizay »». Oo "noho ny fahalalahana napetraka": O Tsy iray amin'ireo antsoina hoe purist an'ny filozofia Free Software aho nefa toa hitako fa tamin'ireto teny ireto dia nampitain'ny mpanoratra ny hevitra fa ny hanafaka ny tanjon'ny Linux Software…. (Hanao dokam-barotra handoavana ny fandaniana amin'ny pejy)
Valiny tamin'i Victor Guerrero
Miarahaba anao, Victor. Ny valinteniko dia nitovy tamin'ny nomeko an'i Alexandro: LibreOffice no Free Software Office Suite tsara indrindra amin'ny Linux, fa ny WPS kosa dia safidy hafa mifehy azy amin'ny Linux. Zavatra iray tsy manilika na mampihena ny iray hafa.
Wismell dia hoy izy:
Fampiharana tena tsara, ampiasaiko amin'ny finday avo lenta io ary amin'ny maha mpampianatra ahy dia atolotro azy ireo foana ho an'ny mpianatro ho toy ny alternation automatique an'ny birao
Valiny tamin'i Wismell
Eny, io dia safidy tokana tena tsara azo atolotra, indrindra raha ampiasaina amin'ny fitaovana finday izy io satria ity fomba ity dia tratra kely ny fiarahan'ny birao.
Adin'i Ivan dia hoy izy:
Manana ny kinova 2019 ity App ity napetraka ao amin'ny Windows 10 Enterprise izay mampiditra MS Office an-tserasera fotsiny aho, ary noho izany dia tiako ny hanana zavatra tsy miankina misimisy kokoa ao amin'ny Laptop-ko. Nijaly tamin'ny kinovan'ny WPS 2016 aho izay midika hoe marary andoha noho ny isan'ny lesoka, nifandray tamin'ny mpamorona aho, toy ny olona hafa ary ho an'ny kinova 2019 dia nihatsara be izany.
Na izany aza, misy ihany ny lesoka sasany, ary ireto no: manorata foana ny renivohitra isaky ny teboka isaky ny mijanona toy ny fijanonana tanteraka ny teboka tsirairay amin'ny Android, ohatra: ... sns. Tsy voavahan'izy ireo izany ..., araka ny hitanao amin'ity ohatra ity, misy sora-baventy aorian'ny vanim-potoana ary tsy mety izany.
Toy izany koa no ataony rehefa miovaova amin'ny pejy iray mankany amin'ny iray hafa, rehefa manoratra lahatsoratra lava misy pejy maromaro ianao, amin'ny pejy manaraka foana dia manoratra sora-baventy.
Izy io koa dia manana fahaizana miditra an-tserasera, saingy zara raha manaiky ny kaontiko Google, matetika aho no nila namerina nanamboatra azy io.
Manolotra ny serivisy fitehirizana rahona koa izy, fa (hahaha !!), mbola tsy afaka nampakatra rakitra mihitsy aho, io no zavatra akaiky indrindra amin'ny rahona tena izy.
Manolotra ny fampiasana takelaka efa noforonina an-tserasera ihany koa izy ity, saingy efa taloha be ireo, toa sary dokambarotra avy any Shina tamin'ny taona 70 tany ho any izy ireo. Mandritra izany fotoana izany dia mavesatra be sy mandany loharano ireo ary mahatonga ny fitaovanao hiadana be.
Nifandray tamin'ny mpamorona indray aho ary namaly tamin'ny teny Anglisy izy ireo, ary toa tsy azon'izy ireo ny teny Espaniola iray.
Etsy ankilany, ny fampiasana LibreOffice dia toa somary sarotra ihany rehefa miresaka ny mifanentana amin'ny Windows. Eo ianao, mihobia!
Valiny tamin'i Iván Guerra
Miarahaba, Ivan. Misaotra anao niditra Efa nampidiriko ny fizarana "Disadvantages" kely ary novaiko ny "Fehiny" mba hanasongadinana ny olana momba ny mampiavaka azy.
ataonao dia hoy izy:
Toa lahatsoratra tsara amiko ny fampahafantarana fa manana ny endriny vaovao ny biraon'ny WPS.
Fa ho ahy satria tsy nanananao ireo nuansa amin'ilay fizarana "Fametrahana sy fikirakira 1.3"
Satria ny programa dia efa asehonao amin'ny alàlan'ny fandaminana amin'ny teny Espaniôla miaraka amin'ny rakibolana mifanaraka aminy. Saingy tsy lazainao hoe taiza ianao no nisintona ny interface sy ny rakibolana ary mainka ny nanampianao azy tamin'ny rafitra na tao an-tranon'ny mpampiasa -_- «» »
Valiny amin'i Doest
Miarahaba anao, Doest. Misaotra anao nandinika. Efa nanampy antsipiriany bebe kokoa aho teo.
sebastianovzky dia hoy izy:
Te hahafantatra ihany koa aho, raha ny amiko dia nametraka an'i Debian aho avy eo nametraka wps, saingy tonga amin'ny teny anglisy, vitanao ve ny nametraka azy tamin'ny Espaniôla?
Mamaly an'i sebastianovzky
Murdok dia hoy izy:
Eny, ho an'ny famerenana bebe kokoa nomeko dia tsy hitako ny rakitra interface amin'ny Espaniôla
Ny akaiky indrindra ahy dia:
Anaran-drakitra File size habe farany novaina SHA1
Any an-toeran-kafa ve? sa nesorin'izy ireo?
Valiny tamin'i Murdok
Ampidino avy amin'ny pejy Arch Linux. Avelako eto ny rohy: https://aur.archlinux.org/packages/wps-office-mui-es-es/
Juan Valdes dia hoy izy:
Tsy tiako mihitsy io fa misaotra an'izay nanokana fotoana hanoratana ny lahatsoratra
Valiny tamin'i Juan Valdés
Mifantoka amin'ny endrika tsy fenitra mikatona izy io, ankoatry ny fikatonan'ny suite. Raha lazaina amin'ny teny hafa dia tsy mifaninana amin'ny LibreOffice izy io, efitrano malalaka izay manohana ny fenitra misokatra toa ny ODF na PDF izay manafaka antsika amin'ny famerana sy fanovana lisansa mihidy. Izy io dia mifaninana amin'ny Microsoft Office, efijery mikatona miaraka amina endrika mihidy izay tsy mifanaraka na dia amin'ireo kinova samihafa an'ny Office aza.
Miarahaba anao, Leo! Mazava ho azy fa na dia tao amin'ilay lahatsoratra aza dia efa nantitranterina mazava tsara fa "" Office WPS "dia maneho" alternativa propriétaire "tsara indrindra amin'ny" Linux ", ankoatry ny sasany, toa ny" FreeOffice ", momba ny fitantanana ny fisie birao" MS Office " . "midika izany. Ny "Office WPS" dia tsy tokony hanolo ny ampahany na tanteraka ny "LibreOffice" fa ny famenoana azy amin'ny lahasa asa amin'ny fisie "MS Office". " Mendrika ny fanamafisana izany. Ary koa, ao amin'ny faritra misy fatiantoka, ny zavatra ratsy momba azy io dia efa voalaza. Saingy, na eo aza ny lafiny ratsy, dia Office Suite tsara indrindra izay mendrika hijerena ny fahalalana ankapobeny an'ny rehetra. Ho famintinana, misaotra anao tamin'ny hevitrao sy ny fandraisanao anjara.
Irving Barrera dia hoy izy:
Ny WPS dia mbola tsy nisolo tena suite mety loatra ho ahy, noho ny antony, tsy manana tena fiasa ho an'ny citation sy bibliographies izy io, ary tsy manohana ireo mpikirakira fanovozan-kevitra toy ny Zotero na Mendeley, singa tena ilaina izay mahatonga ny zavatra niainako tsy hamokatra.
Valiny tamin'i Irving Barrera
Jose Manuel Postigo dia hoy izy:
Ny pejy http://wps-community.org/downloads miditra amin'ny tadiavin'ny redirect ary farafaharatsiny mba tsy idirana aho izao.
Nahita rohy aho https://github.com/wps-community/wps_i18n.git izay mampiditra mora ny fonosana Espaniola.
Raha tianao hisy fiantraikany amin'ny mpampiasa rehetra izany dia asandrato ny tombony ho an'ny mpitantana na mihazakazaka sudo manao install
Valiny tamin'i José Manuel Postigo
Miala tsiny, nametraka an'i Debian fotsiny aho ary namaky ity lahatsoratra ity, efa manana wps napetraka aho, ny pro dia tsy amin'ny Espaniôla.
mihazakazaha izay nolazainao tany amin'ny terminal, fa niverina tamiko io:
faka @ Alpha: / trano / sebastianovzky # git clone https://github.com/wps-community/wps_i18n.git
bash: git: baiko tsy hita
Inona no azoko atao? Voalohany indrindra, Misaotra.
Miarahaba anao, Sebastianovzky. Efa nohavaoziko ny fizarana fametrahana sy ny fikirakira miaraka amin'ireo rohy vaovao izay ahafahanao misintona mora kokoa ireo rakitra voafintin'ny interface sy ny rakibolana amin'ny Espaniôla. Ary somary midina kely ianao dia hahita naoty misy rohy mankany amin'izy ireo miampy ny endritsoratra amin'ny endrika ".deb", mba hanamorana ny zava-drehetra. Vita soa aman-tsara ny fametrahana sy ny fitsapana ny zava-drehetra tamin'ny teny espaniola, tamin'ny fampiasana ireo rakitra ".deb".
IsaacVVVVV dia hoy izy:
Tsy hitako ny fomba handaminana azy amin'ny teny espaniola, tapaka ny rohy aur.
Valiny amin'i IsaacVVVVV
HarmonyOS, sehatra loharano misokatra ho an'ny fitaovana rehetra